Maitiro atinoyedza Amulets uye Rings eSimba, Chengetedzo neMhedzisiro - Nyika yeAmulets
Kuedza Kuporesa Amulets
Iwo akanakisa emari amulets uye musanganiswa wekuwedzera hupfumi hwako
Maitiro atinoyedza Amulets uye Rings eSimba, Chengetedzo uye Mhedzisiro
Zvikanganiso zvakajairika kana uchishanda nemazango.
Maitiro ekushanda zvakananga neiyo 7 Olimpiki Midzimu
musha / Mashiripiti uye simba / Maedzo atinoyedza Amulets uye Rings eSimba, Chengetedzo neMhedzisiro
Zita rangu ndinonzi Bjorn uye ini ndiri mumwe wevanozvimirira vanoyedza amulets. Ndanga ndichiedza mabhureki nemhete dzeWorld of Amulets kwemakore maviri apfuura uye panguva ino ndakaita bvunzo yezvimwe zvinhu zvakakosha saka ndaida kugovana ruzivo rwangu newe.
Seyero yechitatu muyedzo (hapana mashiripiti ruzivo tester) ini ndinosarudza maamuleti kana mhete dzandinonzwa kugadzikana nadzo. Ini handiyedze ese marudzi amulets, chete iwo andinosarudza. Mumakore maviri apfuura ini ndanga ndichiedza anopfuura makumi maviri acho uye ndoda kukutsanangurira maitiro andinoita izvi uye nekukuratidza mhedzisiro yeyangu yazvino bvunzo yemashiripiti mapelini mapini achangobva kubuda.
Ini ndakasarudza akati wandei kuyedza:
Mamoni lapel pini yemari
Mari Lapel Pin
Asmodeus lapel pini
Abraxas lapel pini
The 4 Pins Kwayedzwa:
Ini ndakasarudza izvi kune chinzvimbo chavanacho kuti vagadzire mari. Sehunyanzvi hwekutengesa zvivakwa ndinogara ndichitsvaga nzira dzekuwedzera mari yangu nekuita basa riri nani. Saka ndakafunga kuti pamwe mamwe emapini aya anogona kundibatsira neizvozvo.
Ini ndakapfeka pini yega yega zvakanyatsojeka kwemazuva gumi uye ndakaita kumwe kusanganisa uye heino mhedzisiro:
zita Mazuva akaedzwa Chekutanga mhedzisiro Kubudirira Mwero Kukundikana Mherechedzo
Mamoni Lapel Pin 10 5 90% 1 *
Mari Lapel Pin 10 5 100% 0
Abraxas Lapel pini 10 7 60% 4 ***
4 Pin Masumbu 10 - - - ****
Abraxas + Mamoni 10 4 100% 0
Abraxas + Mari 10 3 100% 0
Asmodeus + Mari 10 - 90% 1 *****
Mamoni + Mari 10 5 100% 0
* Mamoni lapel pini ndeyemari kuburikidza nebhizinesi. Izvo zvakangonditadza ini kamwechete nekusatsanangura nemazvo chinangwa changu.
** Asmodeus ndeyemari kuburikidza nekubhejera. Hauna kuteerera kune anotamba caracter yeMammon uye akaita bheji isiriyo kana ndichitonga vatengi vangu.
*** Abraxas lapel pini ine simba kwazvo asi kwete chete yemari. Ndakawana mhedzisiro ina dzakasiyana kubva pane zvandaitarisira. Mhedzisiro iyi yaive yakanaka asi yakanga isina chekuita nemari.
**** I 4 lapel pin cluster was a distaster. Kune rakasiyana simba uye pasina mhedzisiro. Dzimwe nguva zvishoma zvinowanda.
***** Asmodeus + Pini yemari: Chete 1 kutadza ini ndinopa kune anotamba maitiro eAsmodeus.
Kupfeka 2 pini kwakandipa mhinduro dzakanakisa.
Sumbu rakakura kwete kwete.
Asmodeus haisi yemari ine chekuita nebhizinesi, kune isina kugadzikana nekuda kwayo yakasarudzika vanobheja. Ini ndinoda kumwezve kuyedzwa naye kwemasimba ekubhejera akasimba.
Abraxas iri kuwedzera masimba eimwe pini, ini handingashandise abraxas ndoga mari. Pini iyi ine masimba akawanda uye inoshanda munzvimbo dzakawanda zvekuti ndinokurudzira kuti ishandiswe sechibatsiro kune chero pini yaunoshandisa.
Pini yemari lapel yakaita basa rakakura iri yega uye kunyangwe zvirinani kana ichibatanidzwa neabraxas.
Izvo zvakanaka kuve nemhando dzakasiyana dzemapini ekuwedzera uye sarudza iwo mapini akakodzera eiyo chaiyo occesion. Sarudza nehungwaru uye mhedzisiro inouya nekukurumidza
Sanganisa mabheji emipendero nemazango kana zvindori: Ipo magemenzi nemhete zvinowirirana kwemazuva makumi maviri nemasere, pini yebhegi iri kutowana mhinduro kwauri. Izvo zvipenga nemhete zvinoita sekudyara mbeu, mushure memazuva makumi maviri nemasere kune mhodzi uye zvainoita uye masimba anotanga kukura. Iko hakuna muganho mukukura chero bedzi iwe uchiramba uchivapa iwo tarisiro yavanoda. Asi iwe unowana mhedzisiro yakanaka kwazvo, nekukurumidza, kubva pabhokisi repelini kana ukarishandisa sezvakaratidzwa.
Pfeka mabheji epaketeni sezvaunogona uye uratidze kuvanhu vakawanda sezvinobvira.
Pro's uye zvayakaipira zveapel pini
Iwo mapini anoshanda nekukurumidza kwazvo
Ivo vanogona kubatwa nevamwe vanhu (izvi zvinotokurudzirwa)
Iwe unogona kupfeka akati wandei panguva iyoyo
Ivo vanongoshanda chete kwemwedzi mipfumbamwe
Ndiri kuzovachengeta ivo vachiedza pamwe chete nemazango akasiyana uye mhete kuti vaone kana vaine pesvedzero pane mumwe nemumwe.
Mumwedzi mipfumbamwe kubva ikozvino ini ndichashandisa iyo yekuchenesa uye kuchaja pad kuti ndione kana vachigona kubhadhariswa zvakare.
Mubasa rangu ndinovimba zvakanyanya pahukama saka ndichaedza dzimwe pini dzine hukama nehukama pamwe nemapini emari kuti ndione zvavanogona kundiitira.
Zvakare muMashiripiti nesimba